Monday 11th February 2019 11:40:39 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Shirkada DPWorld waxay Somaliland heshiish la gashay
9/5/2016taa soo ilaa iyo maanta aan hawl muuqata oo la taaban karo ka qabanDekedii Berbera oo ay2 sanadood maamuleysay . Heshiiskii Somaliland iyo DPWwada galeen9/8/2016oo ahaaheshiis30sanadood oo( Bilateral Contract agreements)ayaa ahaa heshiissifeqarsoon oo daaha dabadiisaah loogu heshiiyey in ay heshiiskaasku bixi doontolacag dhan$442 Milliondollar.Waxaana lagu heshiiyey inDPWyeelato saami dhan65%oo udhiganta lacag ahaan$280 million.Somalilaana yeelato Saami dhan35%oo u dhiganta lacag ahaan$162 Milliondollar.Heshiiskanoo aan dhameystirneynoo ahaa nuxur yar oo qabyo qoraal ah ayaa laga ansixiyey Golaha Baarlamaanka Somaliland ka dib markii dhaameel badan loo daadiyey, Sidaas ayaana ayDPWDekedii Berbera ku hantiday kulana wareegtay taariikhdii1/3/2017.
Mudadaa 2-da sanadood ah ee Shirkada DPWorld Dekedamaamulaysaywaxay ku fashilantay inay hirgeliso dhamaan qodobadii lagu heshiiyey oo ay ka mid ahaayeen:
2- In Beked cusub oo800 Mitirah la kaladhisto laba jeer oo min400mah.
4- In Madaar Madani ah Berberalaga dhisto maadaama Madaarkii hore ee Berbera ay Saldhig ciidan ka dhigteen xulufadaimaaraatigu.
5- In aydalka ka fuliyaan Mashaariic fara badan oo arimaha bulshada kor loogu qaadayo sida Caafimaadka, tamarta, beeraha , biyaha iyo waxbarashada
Waxaa beryahan danbe debeda u soo baxday oo isa soo taraayey in Itoobiya ay ka maaran tahay Saamiga Dekeda Berbera , maadaama dawlad cusubi ka dhalatay oo ayEreteriyaheshiiyeen. Waxaana aydawlada Ereteriya kula heshiiyeen in ay Dekedooda xooga saari doonaan oo ay maalgashan doonaan. artintan waxaamarkhaatiga ufuray iyada ooItoobiya aanay xunbo metelaku lahayn Shirkada cusub ee hadaMaamusha Dekeda Berbera ee loo bixiyey ShirkadaDPWorld Berbera. Ka maqnaashan ay ka maqnaatay Itoobiya maamulka cusub ee Dekeda Berbera waxay keentay in Saamiyadii heshiisku ay halkoodii hore ku soo noqdaan oo Somalilaana yeelato saami dhan35%, DPW-na yeelato65%.Itoobiyana meesha laga saaro.
Shirkada DPWorld waxay ku caan baxday in ay kala xado oo kala laaluushto madaxda ay heshiisyada la gasho, waxaa kale oo ay ku caan baxday in ay dabino u daadiso madaxda ay kala xaajoonayso heshiisyada Dekedaha iyada oo isticmaalaysa mar kasta gacan-wadaag, xaqul qalin iyo kala laaluush ay xadhkaha ugu soohanayso si kasta oo ay heshiisyada u kala khiyaamayso sida ayJaboutiku khiyaamaysay,Cadanku sameysay, Lubnaan,Sinigaal,iyoindonisaku khiyaameysay eeUSAlagaga eryeymaantana ay damacsan tahay in ay Somaliland oo aan la ictiraafinku khiyaameyso xeelad iyo xoog.
Bal ka warama DPW lacagtii$240million aheyd ee ay ku balan qaaday in ay ku maalgeliso mashruucii dhismaha wadada Berbera ilaa Wajaable (Berbera Corridor )oo ay ku leedahay waxaan awoodaa hada$80million dollar oo keliya? Bal ka warama iyada oo aan fulin balan qaadkii heshiiskii ay hore Somaliland ula gashay9/8/16eeay laheyd sanad gudahood ayaanu ku dhisaynaa Dekedii400oomitir ah,ayeyiyagu iska dhisteen Dekad Ciidan oo balaadhaniyo Saldhig Ciidanoo bilaash lagu siiyey.Muwaadin ma ogtahay qiimaha ama kirada dhabta ah ee Saldhiga Berbera uu ahaan jiray? Sanadihii1981 ilaa 1991ShirkadiiUSA ee NASAayaaMadaarka Berbera oo keliya oo Saldhig Ciidan u ahaanooweliba Dayaaradahamadaniga ahi la isticmaali jireenay ku kireysteen lacag dhan$40 Millionoo dollar sanadkiiba maantanaDPWorld waxay ubadheedheen inay faro guudkood iyo xaqul qalin yarinaga dhaafsadaan Saldhig Ciidan oo20 km2iyo Dekad Ciidan oo Dhererkeedu yahay10km2.
Muwaadin !Ma ogtahay in Saldhiga yar ee Mareykanku ku leeyahay Jabouti uu ku kiraysan yahay$58 million dollarsanadkiiba, Saldhiga yar ee Fransiisku ku leeyahay Jabouti kiradiisutahay30 Millionoo yuro sanadkiiba, Saldhig yaroo3kmahoo dalka China ku leedahay dalka Jaboutikiradiisutahay$20 milliondollar sanadkiiba. Saldhig yar oo1 mileah oo dawlada Jabanku ku leedahay Jabouti kiradiisu tahay$ 4-Millionsanadkii. Hadaba waxaa layaab iyo amankaag shacabka reer Somaliland ku noqotay markii dhawaan uu Wasiirka Maaliyada Dr Sacad Xaji Ali Shire uu cadeeyey in aan la kireyn SaldhigaBerbera eemashaariic Aabahood goblamay ooaan la fulinaynu ku bedelanaySaldhigaberberaoo dhererkiisu yahay20km2iyo welibaSaldhiga Baddaoo isnadhan ilaa iyo10km2-Arintani waxay u baahan tahay in hayadaha ay khuseysaa ay dabo galaan oo baadhitaan mug leh ku sameeyaan. Waa in Saldhiga Berbera kiro badan aynu dhaafsanaa ama ictiraaf inoogu bedelaan.
Gunaanad:Waa in nuxurka dhabta ah eeHeshiiskaDPW iyo heshiiska Saldhiga Berberaoo iskusidkan Baarlamaankadib loogu soo celiyaasi ay uga doodaan una naaqishaan faa'idada iyo khasaaraha uu heshiisku u leeyahay qarankaSomaliland. Waana lama huraanin caadka iyo ciiradaqarsoon ummadda looga qaadoHeshiiskan ilaa iyo kirooyinkiisii la sii Carbuuntay ee la sii qadintay ee dalka lagu dhacay.
[Daawo Live:-] Wariye Bakayle Oo La Weydiiyay Sababta Uu U Xidhnaa Iyo Cidda Ka Dambeysay Xadhigiisa [Somaliland Miyuu K
[DAAWO TOOS] Xisbiga Waddani Oo Shaaciyey Inuu Ka Baxay Heshiiskii Xisbiyada Qaranka Somaliland
[ WAR DEG DEG AH:] Xisbiga Waddani Oo Immika Ku Dhawaaqay Inay Ka Baxeen Heshiiskii Saddexda Xisbi Qaran